Lalàna 140: Fitsikilovana an’i Libanona · Global Voices teny Malagasy
Manitsakitsaka ny lalànany ihany ny governemanta Libaney.
Voadika ny 30 Avrily 2019 20:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Deutsch, বাংলা, عربي
Beirota. Sary avy amin'i Varun Shiv Kapur tamin'ny alalan'ny Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
Amin'ny teny Arabo avokoa ireo rohy rehetra.
Any Libanona, nankatoavin'ireo manampahefana rehetra ao amin'ny governemanta ny tolokevitra iray hamelàna ireo sampandraharaha nasionaly misahana ny fiarovana ny firenena mba hanana fidirana feno sy tsy voafetra amin'ireo angondrakitry ny fifandraisana an-taribin'ny vahoaka ao Libanona taorian'ny lazaina fa adihevitra fohy sy nafana nandritra ny fivorian'ny kabinetra iray tamin'ny volana lasa teo. Nahasarika kely ny sain'ireo haino aman-jery Lebaney mahazatra ity ampaham-baovao ity, izay tena nanasongadina ilay fepetra ho toy ny vokatra iray hafa tamin'ny fivakivakisana politika eo anivon'ny governemanta ankehitriny. Nisy resaka kely natao mikasika ny mety ho fiantraikan'ilay lalàna any amin'ireo mpampiasa, na ny fahalalana hoe zo amin'ny mahaolombelona ny tsiambaratelo ary tsy tokony havela.
Ao amin'ny fepetra voalohany anatin'izany, iantohan'ilay ilay Lalàna Fanarahamason'i Libanona.ny zo momba ny fiainana manokana amin'ny fampiasàna ireo fitaovam-pifandraisana elektronika rehetra — an-tariby na tsy misy tariby, eo an-toerana sy iraisam-pirenena –
Fa tao anatin'izay taona maro farany izay, rehefa afaka nidirana manerana an'i Libanona ny fandrakofana 3G, niitatra hatrany amin'ny fifandraisana an-tambajotra ny fangatahan'ny governemanta ho an'ny angondrakitra momba ny fifandraisana. Mandika ny lalàna 140 ireo fangatahana angonddrakitra ataon'ny governemanta ireo, mahatratra mponina an-tapitrisany maro ao Libanona. Toy ny nohazavain'ny Mpitsara Awny Ramadan, filohan'ny sampandraharahan'ny fandraisana andraikitra nasionaly tamin'ny onjam-peom-bahoaka, “[Voarara] ny mamoaka angondrakitra ho an'ireo antso an-telefaona ataon'ireo Libaney folo tapitrisa satria tsy afaka atao ho olona ahiahiana avokoa ny Libaney rehetra.”
Satria maka tàhaka ny rafitra Frantsay ireo andri-pitsaràna Libaney amin'ny ankapobeny, tamin'ny 2012 dia noforonina ny delegasiona iray mba handehanana ho any Frantsa hiofana momba ny fampiharana ny zo momba ny fanarahamaso ao amin'io firenena io. Nanazava i Ramadan: ” *Hitan'ilay delegasiona nankany Parisy, notarihin'ny Mpitsara Chokry Sader, ary ahitana miaramila manamboninahitra sy mpahay teknolojia ao amin'ny sehatry ny fifandraisana, fa tsy mamela ireo angondrakitra momba ny fifandraisana ho tantanin'ny depatermantan'ny miaramila ireo manampahefana Frantsay…Raha ny marina, tsy hetsika mahazatra (ao amin'ny governemanta Frantsay) ilay hetsika Libaney tamin'ny fitantanana ireo angondrakitra momba ny fifandraisana”.
Tonga amin'ny fetran'ny lalàny ny governemanta libaney, ary koa ny an'ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Namakafaka hevitra marimpototra momba ity resaka ity ireo Fotokevitry ny Lalàna Iraisam-pirenena mahakasika ny Fampiharana ny Zon'olombelona amin'ny Fanarahamaso ny Fifandraisana. Hita anatin'ireny ny fampifanarahana amin'ny lalàna — tokony ho voaràran'ny lalàna avokoa izay rehetra famerana ny zo hanana fiainana manokana (tsiambaratelo) — tokony hanaporofo mazava izay ilàny an'ireo angondrakitra momba ny fifandraisana ireo mba hahafahana manao fanadihadiana mikasika ny heloka ny manampahefana ; ny manampahefana ara-pitsarana — tokony hadihadiana sy ho eken'ireo manampahefana ara-pitsarana matihanina sy tsy miangatra ireo fanapahankevitra momba ny fanarahamaso, ao anatin'izany ireo fangatahana angondrakitra.
Ny governemanta Libaney ihany no mandika ny lalàny. Tsy hajainy ny zon'ny olontsotra hanana tsiambaratelo amin'ny fifandraisana — fa mihevitra azy rehetra ho toy ny olona ahiahiana avokoa. Tsy misy izany fotokevitra izany mihitsy izy. Efa im-betsaka ny fitondrana ankehitriny sy ny fanjakana Libaney no nanaporofo fa tsy laharam-pahamehany ny filàna sy ny zon'ireo olontsotra. Ary amin'ny famelàna ny tsiambaratelon'ireo olontsotra ao aminy, mety hanimba ny fandriana fahaleman'ny firenena iray manontolo ny governemanta.